धेरै चिन्ता लिनु हुन्छ ? होसियार !! यस्तो समस्या आईलाग्छ
मान्छे भएपछि जीवनमा हरेक आरोह अवरोह आईपर्छ त्यतिबेला सबैलाई चिन्ता लाग्छ। सबैले एउटा उखान सुनेकै होला चिन्तै चिन्ताले चितामा पुर्याउछ । तर,कसैले सोच्दैनन होला चिन्ताले स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउछ भनेर । त्यसैले हामी सकेसम्म चिन्तादेखी टाढा रहनु पर्छ ।
चिन्ताले हामीलाई दिने विभिन्न समस्याहरु यस प्रकार छन् :
१) बूढो बनाउँछ : सँधै चिन्तामा रहने व्यक्तिको शरीरमा नयाँ कोषिकाको विकास ढिलो हुन्छ, जसले गर्दा व्यक्ति चाँडै बूढो देखिन्छ । छालामा चाउरी पर्ने, मांसपेशी कमजोर हुने, आँखा कमजोर हुनेजस्ता बुढ्यौलीका संकेत चाँडै देखा पर्छन् ।
२) मुटु कमजोर बनाउँछ : चिन्ता लिँदा मुटुका मांसपेशी कमजोर हुन्छन् । स्ट्रेस हार्मोनले मुटुको धड्कन बढाउने र नसा संकुचित गरेर रक्तसञ्चारमा बाधा उत्पन्न गराउँछ । यस्ता व्यक्तिलाई हृदयाघात हुने जोखिम बढी हुन्छ ।
३) मोटो बनाउँछ : चिन्ता धेर लिने गरेमा भोक छिटो छिटो लाग्न थाल्छ । जसले गर्दा मानिस धेरै खाने गर्छन् । यसले शरीरलाई मोताउन मद्धत गर्छ ।
४) कपाल झर्छ : चिन्ता लिँदा शरीरमा कोर्टिसोल नाम गरेको हार्मोन उत्सर्जन हुन्छ, जसले कपालका जरालाई कमजोर गरिदिन्छ र कपाल झर्न थाल्छ ।
५) डिप्रेसन निम्त्याउँछ : चिन्ता र तनाव कम गर्न अथवा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले डिप्रेसन र साथै अन्य कडा खालका मानसिक रोग निम्त्याउँछ ।
६) रोगप्रतिरोधी क्षमता घटाउँछ : चिन्ता लिइरहने व्यक्तिको शरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमता घट्न जान्छ, जसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई रुघाखोकी, ज्वरोजस्ता रोग लागिरहन्छन् ।
ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? होसियार !!
कतै तपाइको हात-खुट्टा सुन्निएको त छैन ? सावधान रहनुहोस हीमोग्लोबिनको कमीको लक्षण हुन सक्छ !